The Ab Presents Nepal » जनता रुवाएर जनप्रतिनिधिले साइकल चढ्दा पनि पाप लाग्छ, गाडी त परको कुरो !
जनता रुवाएर जनप्रतिनिधिले साइकल चढ्दा पनि पाप लाग्छ, गाडी त परको कुरो !
काठमाडौं -: काठमाडाैँ । जनप्रतिनिधिहरुको भनेको जनतालाई सुख सुविधा दिएर केही बाँकी रहे आफुलाई सुविधा लिने हो । चुनावका वेला गरेको वाचको अक्षरशः पालना गर्नु जनप्रतिनिधिको धर्म हो, कर्तव्य हो । ‘जनतालाई दैनिक परेको कष्टलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो सुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिने जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्न नसक्ने सोझा वा आँट नभएका जनता रहुन्जेल अथवा जनताले आफ्नो स्वभाव परिर्वतन नगरुन्जेल जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो सुविधामा केन्द्रित रहन्छन् ।
किन छैन भने महानगरपालिकामा बजेटको अभाव भयो रे । विरगन्जकै कुरा गर्दा भारतीय दुतावासले सित्तैमा दिएको मोबाइल स्वास्थ्य भ्यान समेत त्यत्तिकै थन्किएको छ । ‘आवश्यक कामका लागि स्रोत साधन हुँदैन तर सुविधा चाहिए स्रोत साधन सबै जुट्छ । विर गंजको मात्र किन कुरा गर्नु हुन्छ, देशको राजधानी काठमाडौँको कुरा चाहिँ खोइ नि भन्नुहोला । काठमाडाँैका मेयर साबलाई झन् ८५ लाखको गाडी के सुहाउँथ्यो, देशकै राजधानीका मेयर ‘।
८५ लाख पर्ने गाडी छोडेर उहाँले पनि १ करोड ८० लाख पर्ने गाडी खरीद गर्नु भएको रहेछ । भरतपुर महानगर पालिका, भो भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा नगरौँ । केही नभन्दा त यसो भन्यो र उसो भन्यो भनेर टोक्न आउने मेयरज्युका शुभचिन्कहरुले केही भन्यो भने के गर्लान् । खोज पत्रकारीता केन्द्रले सबै डिटेल रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, बाँकी त्यतै हेर्नुहोला ‘